Apple October Event 2013 LIVE ~ The ICT.com.mm Blog
Apple October Event 2013 LIVE
Apple က ဘယ်လို Gadget အသစ်တွေကို မျှဝေမလဲလို့ စောင့်မျှော်နေတဲ့ မြန်မာအိုင်စီတီ ပရိသက်ကြီးအတွက် Link လေးတွေကို အမျည်းလေးအဖြစ် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာ ကျင်းပတော့မယ့် ဒီ event မတိုင်ခင် ကော်နက်ရှင် ကောင်းသူများအတွက်
CNet ရဲ့ အမေးအဖြေလေးတွေ
Appleမှ တိုက်ရိုက် Official လွှင့်မယ့်
ကော်နက်ရှင် ‘မ’ကောင်းသူများအတွက်တော့ ဒီ page /apple-october-22-event/ လေးကို Refresh လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် မြန်မာလို ဖတ်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးလိုက်ပါတယ်။
Tim Cook စင်ပေါ် တက်လာပြီး အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီး အားလုံး စိတ်ဝင်စားမယ့် Apple Product တွေ ယခု မိတ်ဆက်ပေးသွားမယ်လို့ ပြောနေပါပြီ။
Apple iPhone 5S နဲ့ 5c ၉ မီလီယံ ရောင်းခဲ့ ရတဲ့ အကြောင်းလေးပြောပြီး အားပေးခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းတင် video လေး ပြသနေပါတယ်။
iOS7ရဲ့ စာနယ်ဇင်းတွေမှ ချီးမွမ်းခဲ့တဲ့ စကားလေးတွေကို မျှဝေနေပါတယ်။
OS X Maverick ဒီမို ပြသနေပါပြီ။
iCloud Keychain, image processing 1.8 ဆ ပို မြန်ဆန်လာတာတွေ, Safari က New Reader Mode ပါလာတာတွေ, message app and calendar app ရဲ့ integrationတွေ, Map Appမှ Turn by Turn navigationတွေ, Battery ပိုပြီး ကြာရှည်စွာ သုံးနိုင်ကြောင်းတွေနဲ့ Maverick OS Demo ကို အဆုံးသတ်သွားပါတယ်။
Maverick OS အသစ်ကို FREE ဒေါင်းလုဒ်ပေးသွားမယ်လို့ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
13 and 15 inch MacBook Pro with Retina Display အသစ်ကို မိတ်ဆက်ပေးနေပါပြီ။ ၃4th-generation dual-core Haswell chips, and Iris integrated graphics ထည့်သွင်းပေးထားပြီး၊ ၉ နာရီ Battery Life ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
802.11ac Wi-Fi, Thunderbolt2ပါလာပြီး USD 1299 (200 စျေးချပြီး) ရောင်းချသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
MacBook အသစ်တွေရဲ့ စျေးနှုန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Mac Pro က 4K displays ထိ ကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး, HDMI 1.4 လည်း support ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် video editor တွေ အကြိုက် တွေ့စေမှာပါ။ 3.7Ghz quad core machine, 12GB DRAM, Dual FirePro D300, 2GB VRAM each, and 256GB SSD တို့ ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်အကုန်မှာ ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ကာ စျေးနှုန်းကို USD 2999မှ စမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြီးတော့ Mac Proကို USA မှာ assemble လုပ်တာလို့လည်း ပြောပါတယ်။
iLife Apps Version အသစ်ကို မိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ iPhoto, iMovie and Garageband Appတွေဟာ iOS7နဲ့ Mac အတွက်ပါ interface အသစ်တွေ ရရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
iPhotoမှာ ဓာတ်ပုံတွေ organise လုပ်ရတာ ပိုလွယ်လာမယ်။ iMovieမှာ feature အသစ်အဖြစ် iMovie Theater ကို မိတ်ဆက်ပေးပြီး iCloudမှတဆင့် iOSနဲ့ Apple TV တွေကို sync လုပ်ပေးမှာ ဖြစ်တယ်၊ Garageband က 8 tracksကနေ 16 tracks ထိ edit လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိလာတယ်။ iDevice အသစ် ဝယ်ယူသူတိုင်း ဒီ Appတွေ FREE ရမယ်။
iWork ကိုလည်း updates လုပ်ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်တယ်။ Pages appမှာ Inspector ဘေးနားမှာ ကပ်နေတာတွေ့ရတယ်။ Keynote appမှာ transition တွေ ပိုပြီး သဘာဝကျအောင် ဖန်တီးထားတယ်လို့ ဆိုတယ်။ iWork for iCloud ကလည်း Google, Microsoft တို့လို online collarboration မျှဝေလို့ ရလာတယ်။ PC သုံးတဲ့ သူလည်း iCloud account ရှိတာနဲ့ iWork for iCloudကို သုံးနိုင်ပြီ ဖြစ်တယ်။ iDevice, Mac အသစ် ဝယ်ယူသူတိုင်း ဒီ Appတွေ FREE ရမယ်။
iPad Air အသစ်ကို မိတ်ဆက် ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်တယ်။ 20% ပိုပါးပြီး A7 Chip ပါဝင်လာတယ်။ 1.0 Pound ပဲ လေးတယ်။ CPU performance ၈ ဆ ပိုမြန်လာတယ်။ 64bit Desktop အရည်အသွေး ရှိတယ်လို့ ဆိုတယ်။ GPU performanceက original iPadထက် 72ဆ ပိုမြန်တယ်။ 5MB iSight camera, 1080p HD video, FaceTime HD camera with larger pixels, dual microphonesနဲ့အတူ ၁၀နာရီ battery life ရမယ်။ USD499 for 16GB Wifi, USD629 for Cellular တို့ကို iPhone 5Sလိုမျိုး silver and white, and space gray (Gold မပါ) တို့ကို November 1မှ စတင် ရောင်းချပေးသွားမယ်။
iPad mini လည်း Retina ဖြစ်လာတယ်။ USD 399 မှ စတင် ရောင်းချပေးသွားမယ်။ iPad အသစ်တွေရဲ့ စျေးနှုန်းအားလုံးကို လေ့လာနိုင်တယ်။
Live, Live Coverage
Newer Apple က iPad Air ကိုထုတ်ဖော်ပြသ
Older Nokia က Lumia 1520 , Lumia 1320 ဖုန်းနှစ်လုံးကိုထုတ်ဖော်ပြသ
Live Coverage for iPhone Event
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ Cupertinoမြို့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့ iPhone Eventကို မြန်မာအိုင်စီတီသတင်းအဖွဲ့မှ ဒီနေရာကန...
3 thoughts on “Apple October Event 2013 LIVE”
Nyi Soe Htet says:
4K display??? Who made this technology??? Sharp? Sony? Samsung? Hitachi? These companies are kicking apple ass.
Mu Sar says:
Tazar Phyo Wai says: